कबिताको कहानी (भाग ४) - Nepali Sex Tube
उसलाई रश्मी भन्ने साथीले फोन गरेकी छ भन्दै उसको ममी बोलाउन आउनु भयो । हामी एउटै क्लासमा पढ्ने साथी भएकाले उसका सबै साथी मेरा पनि साथी थिए । तर रश्मी नाम गरेको साथी मैले चिन्न सकिनँ । फोनमा कुरा गरिसकेर ऊ फर्किएपछि उसलाई मैले सोधेँ, ‘रश्मी भनेको को हो ?’उसले मेरो प्रश्नको जवाफ नदिइकनै टार्ने कोसिसमा भनि- ‘छाड्दे न यार ।’ मलाई उसको कुराले चित्त बुझेन । अनि सोधेँ, ‘मैले नचिन्ने पनि तेरो साथी छन् र ?’
तर पनि उसले रश्मीको ’boutमा राम्ररी भनिन । मैले कर गरेरै सोधेँ- ‘भन न को हो ? मैले चिन्नु नहुने हो र ?’अनि उसले भनि, ‘सीमराकै एक आइमाइ हो, कोही गेस्ट आएको छ रे । त्यही भएर एक घण्टामा आउनु भनेर बोलाएकी ।’ छक्क मान्दै मैले फेरि सोधेँ, ‘उसको गेस्ट आउँदा तलाई किन बोलाउनु पर्‍यो ?’ उसले मलाई सबैकुरा नबताइ सुखै पाइन ।अनि भनि, ‘एउटा गेस्टसँग बसेर ३-४ घण्टा बिताउँदा ५ हजार पाइन्छ यार । आफूलाई पनि मज्जा, अनि पैसा पनि हुने ।’उसको जाने बेला भइसकेको थियो । उसले भनि ‘बरु हिडँ, तलाई पनि म चिनाइदिन्छु ।’ मलाई उसको कुराले दोधारमा पार्‍यो ।
उसको घरबाट सँगै निस्कियौं तर बाटोमा उसले धेरै कर गरेका कारण म पनि ऊसँगै गए ।गाउँबाट अलि पर एक तले एउटा घरमा हामी पस्यौं । पाँच कोठे सो घरको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ एउटी आइमाइ र दुइ पुरुष देखियो । अरु कोठा बन्द थिए । ती पुरुषले बियर पिइरहेका थिए । अनि आइमाइ चाँही मासु चिउरा खाँदैथिइ ।’बस दीपा । ऊ को हो नी ?’ आइमाइले सोधी । दीपाले जवाफ दिइ- ‘यो मेरो साथी हो, कबिता ।’ हामी एकातिरको सोफामा बस्यौं । मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो । सामुन्ने बसेका दुइ पुरुषले मलाई र दीपालाई पालैपालो गिद्दे नजर लगाइरहेका थिए ।
’केही खाने हो ?’ आइमाइले हामीतिर हेर्दै सोधी । ‘भर्खर खाना खाएको, भै गो केही नखाउँ,’ दीपाले भनि । यत्तिकैमा एउटा पुरुषले भन्यो, ‘चिसो लिए भइहाल्छ नि, कुल भएर बस न ।’आइमाइ जुरुक्क उठेर पल्लो कोठामा गइ दुइवटा कोक लिएर आइ । ‘ऊ पनि मेम्बर नै हो ?’ आइमाइले मतिर इशारा गर्दै दीपासँग सोधि । अनि दीपाले भनि, ‘होइन, मेरो घरमा आएकी थिइ अनि यहाँसम्म मसँगै आएकी ।”कुरा मिले मेम्बर बनाए भइहाल्छ नि,’ अर्को पुरुषले भन्यो । अनि दीपालाई त्यो आइमाइले पल्लो कोठामा लिएर गइ ।
पहिला उसको काम सकौं है त ।’अनि ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थाल्यो । अनि अर्कोले दीपाको लुगा खोल्यो । क्षणभर मै दीपा नाङ्गो भइसकेकी थिइ । उसले आफूसँगै नाङ्गिएको केटोको तलदेखि माथिसम्म हेरि । अनि पलङमा खुट्टा तल झार्दै बसी । अर्को केटाले पनि लुगा खोल्न थाल्यो ।पहिलो केटाले दीपाको त्रि्रा सुम्सुम्यायो । अनि मुखमा म्वाइ खायो । दोस्रोले आफ्नो लिंग समातेर दीपाको स्तनमा दल्यो । ‘अहिले नै फोहोर नपार न यार, एक छिन मजा लुट्न दे न ।’ अर्को केटाले भन्यो ।’मजा लुट्न अर्को माल सिंगै छँदैछ नि ।’ पहिलोले भन्यो । अनि दीपाको दु्ध च्याप्प समात्यो । दोस्रोले पुती मुसार्न थाल्यो । दीपाको शरीरमा हलचल भइरहेको थियो । ऊ के गरौं र कसो गरौं भन्ने गरी यताउती शरीर मर्काइरहेकी थिइ ।यत्तिकैमा एउटाले आफ्नो लिंग दीपाको मुखमा दल्यो । मलाई घिन लागिरहेको थियो ।
दीपाले मुख बन्द गरिरहेकी थिइ । तर त्यो केटाले दीपाको ओठमा लिंगको टुप्पो दल्यो । अनि दीपाको सामुन्ने उभिएर मुखमा लाडो राख्दै ठेल्न थाल्यो । दीपाले अझै मुख खोलेकी थिइन । अनि अर्को केटो पलङमा चढ्यो र दीपालाई आफूतिर तान्यो । उसले दीपालाई हात घुँडा टेकाएर पशुझैं राख्यो । अनि अर्कोले दीपाको मुखमा लाडो दलिरह्यो । पछाडीपट्टी रहेको केटोले दीपाको पुतीतिर लाडो ठेलिरहेको थियो तर बीचमा दीपाले भनि, ‘ऐया, अर्कोमा छिर्‍यो, प्वाल हेरेर त छिराउनु नि ।’
तर त्यो केटाले भन्यो, ‘छिराएकै यसैमा हो नि मैया ।’ दीपाले भनि, ‘त्यसमा त नाइँ… हुँदैन ।’म छक्क परेँ । सायद त्यो केटाले दीपाको चाकमा छिराइरहेको छ । यत्तिकैमा उसले लाडो निकाल्यो र छेउमा रहेको एउटा सीसीबाट कुनै झोल आफ्नो हातमा झार्‍यो अनि लाडोमा दल्न थाल्यो ।एकछिनमा ऊ फेरि दीपाको पछिल्तिरबाटै लाडो सोझ्याउँदै ठेल्न थाल्यो । दीपा झस्किइ । ‘के गर्‍या भन्या..? त्यसमा नगर्नुस् न । अर्कोमा छिराउनु ।’ अनि उसले भन्यो, ‘इङ्गलिस स्टाइल भनेर सात हजार दिएको छु मैया । धेरै नाटक नगर ।’उसले छोडेन । अनि अघिल्तिरकोले पनि दीपाको मुख खुलेको मौका छोपेर लाडोलाई मुखभित्रै हुलिदियो । दीपा ‘उँ…उँ..’ गर्दैथिइ ।
‘चाकतिर हुलिरहेको केटाले केहीबेरमा लाडो झिक्यो र हातले खेलायो । उसको लाडोबाट बिर्यको फोहोरा छुट्यो दीपाको ढाडमा । दीपाले बीर्य खसेको ठाउँमा हात लगि, उसको हातभरी लाग्यो । उसले तन्दामा हात दली । अनि उत्तानो परेको केटाले दीपालाई सर्लक्क पल्टायो र आफू दीपामाथि घोप्टिएर दनादन पेल्न थाल्यो । दीपा उँ.. उँ.. गर्दै थिइ । केही बेरमा ऊ पनि शान्त भयो । उसले चाँही दीपाको पुतीमै बीर्य झार्‍यो । ‘आमै..भित्रै झारेको ?’ दीपाले भनि । केटो केही बोलेन ।